Ogaden News Agency (ONA) – Qubanaha Wararka Kala Duwan ee Ogadenya.
Qubanaha Wararka Kala Duwan ee Ogadenya.
Posted by ONA Admin	/ August 23, 2018
Guud ahaan Ogadenya ayaa ku jirta xaalad Militari oo deg deg ah. Khadkii isgaadhsiinta oo idil ayaa gabi ahaanba hawada ka maqan. Magaalooyin qaar korontadii iyo biyihii ayaa laga jaray.
Shacabka Soomaalida Ogadenya ayaa waxaa lasoo daristay cabsi iyo walbahaar badan oo ay ka qabaan joogitaanka ciidanka Militariga Itoobiya. Arintan ayaa shacabka filansho waa ku noqotay xilli ay filayeen in maamulka cusub ee Addis ababa uu isbedal balaadhan oo dhan walba ah oo la imaan doono ayaa taas badalkeeda wuxuu shacabku ku waabariistay weerar iyo taangi Militari.
Dhinaca kale maleeshiyo ka amar qaadata Ismaamulka Oromiya ayaa Baabuur Shaamboo ah oo laga leeyahay una shaqeeya Degmada Fiiq ee gobalka Nogob si xoog ah kaga ka xaystay Magaalada Baabili kadibna waxay Afduub ahaan ugu haystaan banaanka Magaalada.
Odayaal dhaqan oo tiradoodu 30 tahay ayaa la kulmay Generalka madaxa ka ah kooxda xukunka deg-dega ah, waxayna ka codsadeen in Baabuurka loo celiyo degmada maaddaama oo ay degmadii go’doon tahay.
Generalka ayaa Odayaasha u sheegay in uuna waxba ka qaban karin arrintaa. Odayaasha ayaa ka xanaaqay arrintaa waxayna Generalka waydiiyeen sida loogu kalsoonaan karo dhex-dhexaadnimada Ciidanka Ethiopia. Odayaashu waxay xuseen dilkii Foosha xumaa ee Maleeshiyo Oromo ah todobaadkii hore u gaysteen Shan (5) qof oo Soomaaliyeed, Baabuurkii ay wateenna qaateen, maydkoodiina aan weli eheladoodii loo keenin iyo sida ayna waxba uga qabanin Military-ga Ethiopia.